BIBLE MU ASƐM: “Hwan na ɔbɛsoɛ wo ntomadan mu? . . . Deɛ ɔnante nokorɛdie mu na ɔyɛ adetenenee, na ɔka nokwasɛm n’akomam.”—Dwom 15:1, 2.
ƐSO MFASOƆ: Nnipa pɛ obi a ɔdi nokorɛ a wɔbɛtumi de wɔn ho ato ne so. Nanso sɛ saa nnipa korɔ yi ara nya hokwan a ɛbɛma wɔadi atorɔ anya wɔn ho a, dɛn na wɔbɛyɛ? Ɛhɔ na nea ɛwɔ wɔn akomam bɛda adi.
Raquel yɛ ababaa a ɔtotɔ nneɛma ma n’adwuma. Ɔkaa sɛ: “Ná adwadifoɔ bi pɛ sɛ wɔde sika daadaa me na me ne wɔn di dwa. Wɔhyɛɛ me bɔ sɛ, sɛ metɔ wɔn nneɛma a, wɔbɛtete so ama mede ahyɛ me ho. Nanso mekaee sɛ Bible tu yɛn fo sɛ yɛnni nokorɛ, enti mampene. M’adwumawura tee ho asɛm na ɛfi saa berɛ no na ɔnni me ho agorɔ koraa.”
Sɛ Raquel maa wɔde sika daadaa no a, anka ɛrenkyɛ koraa na wanya ne ho. Nanso sɛ n’adwumawura te a, dɛn na ɛbɛsi? Anka ɔbɛma Raquel akɔ so atena adwuma no mu? Na sɛ ɔrekɔpɛ adwuma foforɔ nso ɛ? Na biribi foforɔ wɔ hɔ a ɛhia Raquel paa. Na ɔmpɛ sɛ ɔbɛsɛe n’ahonim ne ne din. Mmebusɛm 22:1 ka sɛ: “Din pa na ɛsɛ sɛ wɔyie, na ɛnyɛ ahonyadeɛ pii; animuonyam yɛ sene dwetɛ ne sika mpo.”
Ná obiara nim Jessie sɛ ɔdi nokorɛ wɔ adwumam
Jessie yɛ aberanteɛ a na ɔdi nokorɛ, enti na n’adwumawura nsi no fam. Mfasoɔ bɛn na ɔnyaeɛ? Wɔbɔɔ n’aba so yɛɛ no panin wɔ n’adwuma mu, na ɔnyaa hokwan pii nso. Wei enti na ɔnya berɛ ma ne yere ne ne mma, na na ɔnya berɛ nso de yɛ nneɛma foforɔ wɔ ne som mu.
Sɛ ebinom repɛ nnipa ne wɔn ayɛ adwuma a, wɔtaa kɔ baabi a wɔbɛnya nnipa a wɔdi nokorɛ. Nhwɛsoɔ bi nie: Adwumawura bi a ɔwɔ Philippines twerɛɛ krataa kɔɔ Yehowa Adansefoɔ ɔfese sɛ, sɛ Adansefoɔ no bi repɛ adwuma a, wɔbɛtumi atwerɛ aba. Ɔkaa sɛ: “Wɔdi nokorɛ na wɔpɛ adwuma.” Nanso sɛ nkamfoɔ ne ayeyie bi wɔ hɔ a, ɛsɛ sɛ yɛde ma Yehowa Nyankopɔn, efisɛ ɔno na ɔkyerɛkyerɛ yɛn sɛ ‘yɛntan bɔne’ na ‘yɛnnɔ papa.’—Amos 5:15.